Tantalum (ingiriis: Tantalum) astaanta (Ta) waa curiye kimiko oo tirada atomkiisu tahay todobaatan-iyo-sadex (73). Curiyaha Tantalum waa bir ka tirsan Transitional Metalska guruubka 4aad ee Diwaanka Curiye, taas oo miisaanka atomkeedu yahay 180.94788.
Curiyaha Tantalum waxaa markii hore loo yaqaanay Tantalium, magacaas oo laga soo xigtan sheekooyin hore ee Giriiga, Tantalus. Birtani waa mid aad ugu yar dhulka, leh midab buluug cagaar ku dhex jiro, taas oo adkeysi fiican u leh daxaleysiga.
Birta Tantalum inta badan waxaa laga sameeyaa qalabka laabka (laboratory) lagu isticmaalo, in lagu dahaaro biraha kale ee jaandiga, iyo sheeyada elektarooniga sida Taleefanka Gacanta, Dvdga, Koombuyuutarka, ciyaaraha videoga iyo wixii la mid ah.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Tantalum&oldid=144150"
Last edited on 28 May 2015, at 14:04
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 28 May 2015, marka ee eheed 14:04.